August 22, 2019 - Myitter
August 22, 2019 Myitter 0
စီးပွားရေးကြောင့် ညစဉ်ညတိုင်း မျက်ရည်ကျရတယ်ဆိဲိုတဲ့ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ မျက်ရည်ကျနေကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်း ဦးခင်ရွှေ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်၂၂ရက် – သူအပါအဝင် မျက်ရည်တောက်တောက်ကျရတဲ့ အထိ စီးပွားရေး အခက်အခဲတွေ ရှိနေကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိနေကြတယ်လို့်ိ ဦးခင်ရွှေ က ဒီကနေ့မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ မျက်ရည်ကျရတာက ညစဉ် ညတိုင်း ပါလို့ […]
ကြောင်နှင့်ဆော့နေတဲ့ သုံးနှစ်သမီးအား အသက် (၇၀) အဖိုးကြီးမှ လမ်းမပေါ်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV(ရုပ်သံ) နေအိမ်ရှေ့တွင် ကြောင်နှင့်ဆော့နေတဲ့ သုံးနှစ်သမီးအား အသက် (၇၀) အဖိုးကြီးမှ လမ်းမပေါ်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV(ရုပ်သံ)ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့ မှာ နေအိမ်ရှေ့မှာ ကြောင်နဲ့ ဆော့နေတဲ့ သုံးနှစ်သမီးကို […]
ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက် ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ထောက်ထားစာနာမှု၊ ၀မ်းနည်းမှုများနှင့် အတူ အောက်ပါကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ (မန္တလေး)တွင် ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း မမျှော်လင့်သော ဆေးကုသမှုဖြစ်စဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းဖြစ်စဉ်သည် […]
ဒီလောက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး တစ်ယောက်ကို တွေ့ရ သိရတာ နိုင်ငံအတွက် အားရှိလိုက်တာ။ ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေ…အဲဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သမီးငယ်လေးနံမည်က “စွမ်းရည်“တဲ့။ဲ မြန်မာပြည်က ၄ တန်းကျောင်းသူ “စွမ်း”…. စင်္ကာပူကို မိခင်နဲ့အတူလာလည်ရင်း …. ခဏတည်းတဲ့အိမ်က အိမ်ရှင် ကလေးလေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အစိုးရကျောင်းမှာ […]
ကွတ်ခိုင်တွင် ပိတ်မိနေသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားအချို့ကို တပ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ကယ်ထုတ် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တိုက်ပွဲများကြောင့် ကွတ်ခိုင်တွင်ပိတ်မိနေသော နိုင်ငံခြားသား ၂၈ ဦးအား တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက သယ်ထုတ်လာခဲ့ပြီး နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီတွင် လားရှိုးလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အား ရန်ကုန်မြို့သို့ မည်သည့်လေကြောင်းအစီအစဉ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးရမည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်သာဆက်လက်ပို့ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသားများတွင် […]
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကို အဂတိလိုက်စားမှု ကော်မရှင်နဲ့ တိုင်ကြားရခြင်း၏ နောက်ကွယ်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှင်းသွားပါပြီ မီတာတင်ဒါ အောင်တဲ့ကုမ္ပဏီထက် ဦးပိုင်က ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၃၄၃ သန်းပိုများနေတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးသက်သာပြီး ပစ္စည်းပိုကောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီကို လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီမှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က မြန်မာပြည်ကို မီတာဘောက်စ်သွင်းခွင့်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ […]
ပန်းလှိုင်စီလုံ ဆေးရုံမှာ ဆုံးသွားတဲ့ သမီးလေး ကိစ္စ
ကြားသိရသမျှ အချက်အလက်တွေကို ကို Thar Nyi အကောင့်ကနေ ယူပါတယ်။ ၁- ၁၁ရက်နေ့မှာ သွားပြ၊ ၁၂ရက်နေ့မှာ အသားစ စစ်ဆေး၊ ၁၈ရက်နေ့ မနက် ၆နာရီမှာစခွဲ၊ ၇နာရီခွဲမှာ ခွဲထုတ်လို့ ရတဲ့ အကြိတ်လေး မိဘတွေကို လာပြ၊ ၉နာရီလောက်မှာ ကလေး နှလုံးခုန်မြန်နေလို့ […]
“မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုတာ”
“မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုတာ” ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ မက္ကဆီကို နိုင်ငံဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ခရစ်ယာန်များတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲဒီ မက္ကဆီကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်စ လူ (၃၀) လောက် မြန်မာပြည် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မန္တလေးက မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝင်ဖူးပြီးတော့ စစ်ကိုင်း ရောက်လာတယ်။ […]